Xafladda BORAMA COMES TO HENLEY maxaad kala socotaa? Maxaase muhiim ah in aad ka ogaato? | Awdalpress.com
Xafladda BORAMA COMES TO HENLEY maxaad kala socotaa? Maxaase muhiim ah in aad ka ogaato?
Waxa Daabacay staff-reporter on Jul 13th, 2017 and filed under Daily Somali News, Editorial. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Xidhiidhka labada magaalo ee Borama iyo Henley ayaa la bilaabay sannadkii 1982kii. Waxana aas-aaskiisa bud-dhig u ahaa sarkaal Ingiriis ah oo ka soo jeeda Henley-on-Thames, magaciisana la yidhaa Brigardier Malcolm Page, oo wakhtigii gumaysiga Ingiriisku maamulayey Somaliland ka shaqayn jiray Borama.
Magaalada Henley waxa ay ka mid tahay magaalooyinka qaniga ku ah cilmiga, siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka Ingiriiska, waxana ay dhacdaa badhtamaha galbeedka koonfureed ee dalka Ingiriiska, gobol ahaanna waxa ay kaabka ku haysaa amma isku degaan yihiin, degmooyinka Oxford, Reading, Windsor iyo magaalooyin kale oo magac leh. Magaca weyn ee ay caanka ku tahay magaaladaasi waa Henley-on-Thames. Oo loogu magac daray webiga ugu weyn dalka Ingiriiska ee dhex mara gobolkooda, siiba magaalooyinka Henley-on -Thames, Oxford ( oo uu maro Isis ). Reading iyo Windsor.
Sida qaalibka ah, magaalooyinka miisaanka ku leh dalalka reer galbeedk sida Henley-on-Thames oo kale, waxa ay caan ku yihiin, raadinta is-dhex galka ummadaha kale iyo in ay helaan magaalooyin ay mataano la noqdaan. Xidhiidhka magaalooyinka mataanoobaana waxa ay wadaagaan wax yaal badan, tusaale ahaan iyaga oo iska caawiya dhinaca horumarka, waxbarashada, caafimaadka iyo wax la mid ah. Sidoo kale waxa ay labada shacab wada yeeshaan is dhex gal ay is booqdaan. Laakiin muddadaasi dheer ee ay Henley iyo Borama mataana ahaayeen, way yar tahay mucaawinooyin ay kala heleen amma weli may dhicin in ay reer Henley soo booqdaan Borama. Deeqo waxbarasho iyo mucaawinooyin waaweyna haba sheegin.
Waxan ognahay in dugsiga Farsamada ee ku yaalla tuulo la yidhaa Abaarso oo ku taalla duleedka Hargeysa ( Somaliland ) uu xidhiidh saaxiibtinnimo la leeyahay magaalada maraykanka ku taalla, oo ay ardayda dugsigaa Abaarso wax ku barataa sannad walba magaaladaasi maraykanka ku taalla ka helaan waxbarasho bilaash ah (Scholarships), oo ay ku tagaan Harvard University iyo Jaamacado kale. Taasi dhiggeedii weli qurba joogta reer Borama ee Ingiriiska deggen iyo golaha degaanka Borama kamay hawl gelin sidii ay Henley-on-Thames waxbarasho bilaash ah ( Scholarships) ugu deeqi lahayd ardayda reer Borama amma wax ka barta tuulooyinka ku xeeran Borama, kuwaasi oo Scholarships ka heli lahaa Oxford University oo ah Jaamicad ku taalla degaankooda, machadyo farsamo ama jaamacado kale. Fursadahaasi oo ay heli lahaayeen ardayda fahmada badan ee wax ka barata Borama iyo nawaaxigeeda.
Dhinaca horumarka oo ay magaalada Borama baahi weyn u qabto, oo magaalada Henley-on-Thames ay ka caawin kari lahayd ayaa iyaduna meesha ka maqan. Dad aan arrintaa ka waraysannayna waxa ay ku talinayaan, in wixii immiga ka danbeeya laga hawl galo, sidii loo heli lahaa guddi dhexda u xidhata kana midha dhalin dhaliya xidhiidhkaa dihin, isla markaana sameeya ama bilaaba xidhiidh wax ku ool ah. Oo ay labada magaalo yeeshaan. Kana durugsan xaflad ay Jaaliyadda reer Awdal maalin ku soo baashaalaan magaaladaasi quruxda badan.
Arrimahaa aan soo sheegnay ee ragaaday, waxa fiican in sida ugu dhakhso badan looga hawl galo, oo weliba dad aqoon sare lihi ay ka hawl galaan. Laakiin in xafladdan sannadlaha ah oo keliya uun lagu qancaa, waa mid sii dheeraynaysa daboolista baahida jirta. Ee weliba ay qabaab dadka iyo dalka degaanka Borama. Ururka Samafalka ah ee lagu magacaabo ( Samasonic Relief ) oo ka sajilan dalka Ingiriiska, una tafa xaytay in uu xidhiidhkaa labada magaalo ka midho dhaliyo ama maamulo ayaa dad badani saluugsan yihiin, kula talinayaan in ay qorshaha xidhiidhkaa ku wajahan gogoshiisa ballaadhiyaan. Sidoo kale waxa lagama maar maan ah in golaha degaanka Borama uu toos ula soo xidhiidho golaha degaanka Henley, Mr Page iyo dadka ay u malayn karaan in ay wax kala qaban karaan toosinta xidhiidhka Henley iyo Borama.
Inta aan ognahay, waxa saddexdii sano ee ugu danbeeyey Henley lagu qabtay xaflado dhaqan, oo ay Jaaliyadda reer Borama ee UK deggeni ay ku soo bandhigtay ciyaaro, heeso iyo qalabka aan Somali ahaan dhaqanka u leenahay. Sida Sibraarka, Kabaha Maaska ah, dharka dhaqanka, fidhinka iyo Barkinka, xeedhooyinka iyo fandhaallada IWM. Waxana xafladdaasi lagu qabtaa faras magaalaha Henley amma barxadda ka soo horjeedda guriga looga taliyo magaaladaasi. Xafladahaasi waxa ka soo qayb galay Mayerka magaalada Henley iyo duqa u qaabilsan xidhiidhka labada magaalo Mr. Page, oo immiga duq ah. Sannaddadii ka horreeyey waxa Borama ka iman jiray wefdi ballaadhan oo ay ka mid yihiin Mayarka, aqoon yahanno, duqay iyo Sheekhal-baladka ka iman jiray. Wafdigaasi ka iman jiray Borama iyo duqayda magaalada Henley waxa ay wada yeelan jireen kulammo wax ku ool ah. Taasina waxa ay ahayd tallaabooyin lagu adkaynayey xidhiidhka labada degaan. Isla markaanan lagu kala war qaadanayey.
Gaba gabadii, waxan ku talin lahayn in xidhiidhkaa Henley laga faa’iidaysto, wax badanna looga taro da’yarta iyo degaanka. Qorshaha xafladda Borama comes to Henley ee 15ka July-na waxan ku ammaanaynaa qaban qaabiyayaasha oo ah ururka Somason ee ka diiwaan gashan dalka UK.
This post has been viewed 10536 times.